Healthy Lifestyle – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ရေရှည်ကျန်းမာစေရန် ကိုယ်နေဟန်ထား စမတ်ကျကျနေပါ
၊ လရိပ်မေ ၊ ကိုယ်နေဟန်ကို ပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့် ကိုယ့်အသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သလို ရေရှည်ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ (၁) မတ်မတ်ရပ်ပါ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်မှာအညီအမျှ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျောပြင်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပါ။ ဒူးနဲ့ တင်ပါးကို ပျော့ပျောင်းစွာထားပါ။ ဦးခေါင်းကို မတ်မတ်ထားပြီး ရပ်ပါ။ ကျောရိုးကိုဖြောင့်ထားတာကြောင့်...
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တောင်ငူမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး တောင်ငူမှာပင် အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်၌ အိမ်ထောင်ကျခဲ့သူ အဘွားဒေါ်စောကြည်သည် ယခု အသက် ၉၇ နှစ်အရွယ်အထိ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖျတ်လတ်ဆဲ ဖြစ်သည်။ “အဘွားက အစားအသောက်အနေနဲ့ ၀က်သားမစားဘူး၊ ဟင်းအနှစ်တွေ၊ အဆီအအိမ့်တွေ...
၊ ကိုထက် ၊ ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ရိုးရှင်းတဲ့ ဘ၀နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်က ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ၊ အစားအသောက်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်တာ၊ အရက်ကို မသောက်ဘဲနေတာ ဒါမှမဟုတ် လျှော့သောက်တာ စတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက...
ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ မြန်မြန်ဝိတ်ကျစေမည့် ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံ ၁၀
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၀ိတ်လည်း ကျချင်တယ်၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာလည်း စိုးတယ်၊ အစားအသောက်ကိုလည်း များများ မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုသူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ အမြန်ဝိတ်ကျစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သတိထားပါ အရွက်သုပ်တွေက သာမန်အားဖြင့် ကယ်လိုရီနည်းတာမှန်ပေမယ့် အရွက်သုပ်ထဲမှာ...
ကျန်းမာပြီးအသက်ရှည်ရေးအတွက် ပုံမှန် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အခြေခံ အချက် ၁၀
၊ လရိပ်မေ ၊ ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံဟာ ဆေးဝါးတွေ မှီဝဲနေတာထက် ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အသက်ရှည်ရှည်၊ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကတော့ ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်ပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တို့အတွက် တစ်နေ့တာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ
ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေက တစ်နေ့ ထမင်း ဘယ်လောက် စားရမလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ အ၀လွန်သူတွေအတွက် ထမင်းကို လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး သုံးလုံးခန့် စားနိုင်ပါတယ်။ ပိန်သူတွေအတွက်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး သုံးလုံးထက် ပိုစားနိုင်ပါတယ်။...
မေး ။ အဖေ့အသက်က ၄၂နှစ်ပါ။ သည်းခြေထုတ်ထားပါတယ်။ သည်းခြေထုတ်ပြီးနောက် ဒေါသပိုကြီးလာပါတယ်။ သည်းခြေထုတ်ထားသူအနေ နဲ့ရှောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့်တွေ၊ ရှောင်ရမယ့် အစားအသောက်တွေသိချင်ပါတယ်။ ဘာတွေ ဆောင်သင့်၊ စားသင့်တယ်ဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မောင်နိုင်၊ မင်္ဂလာဒုံ။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်...
သင့်တစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာစေမည့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ မျက်စိကျန်းမာဖို့ . . . နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုကို တတ်နိုင်သမျှဆင်ခြင်ပါ၊ အပြင်သွားရင် နေကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ပါ။ စိတ်ကိုအနားပေးပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ စိမ်းစိုတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားပေးပါ။ အဆုတ်ကျန်းမာဖို့ . . . အိမ်တွင်း...
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် မရောက်မီ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှု မဖြစ်စေရန်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မရောက်ခင် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ အမြဲကျန်းမာနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် ဖျော်သောက်တဲ့အခါတိုင်း သကြားလက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဝက်လောက်ပဲ ထည့်ဖျော်ပြီး သောက်ပါ။ – အဆင်သင့်အစာမစားဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုးစားချက်ပြုတ်စားသောက်ပါ။ –...
နာတာရှည် ကျန်းမာရေး ပြဿနာခံစားနေရသူတို့အတွက် ဘ၀နေပျော်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြဿနာ ခံစားနေရသူတွေ၊ အခြေခံရောဂါဝေဒနာရှိသူတွေဟာ ဘ၀မှာ စိတ်ဓာတ်ကျမနေဘဲ ဘ၀မှာ အများနည်းတူ ပျော်ရွှင်စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ – တစ်ယောက်တည်း မနေပါနဲ့၊ အပေါင်းအသင်း နဲ့နေပါ။ – မိသားစုဘ၀ကို အချိန်ပေးပြီးနေပါ။...